Degmada Vellinge oo tallaabo u qaaday dhanka mamnuuca baryada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Carina Wutzler (M), hoggaamiyaha hoggaanka degmada Vellinge. Foto: Jonathan Hansen/Sveriges Radio
Degmada Vellinge oo tallaabo u qaaday dhanka mamnuuca baryada
Qaybo ka mid ah degmada Vellinge oo baryada la mamnuucay
La daabacay onsdag 30 augusti 2017 kl 13.51
Hoggaanka degmada Vellinge ”Kommunstyrelsen” ee gobolka Skåne wuxuu dubbaha ku dhuftay inuu degmada ka mamnuuco tuugsiga. Iyada oo hoggaanka degmada looga fadhiyo inuu go’aan kama dambeeys ah middaa ka gaaro bisha sebteembar, hase yeeshee uu goolku yahay inuu hir-galo sannadka foodda innagu soo haya ee 2018.
Carina Wutzler, oo hoggaanka degmada Vellinge u matasha xisbiga Moderaterna, ayaa aamin-san in go’aankani noqon doono mid macne baallaaran ku fadhiya.
–Degmooyin kale ayaa ku dayan doona dhabbada degmada Vellinge, sida aan aamin-sanahay iyo iney culeeys saaraan maamulka dalka sidii uu u soo saari lahaa dhabba-tus, sida ay sheegtay.
–Maanta waa xaalad uu mugdi ku jiro. Iilama muuqato in xaaladdan sidii loo baahnaa looga howl-galey. Muddo sannooyin iminka ey ka soo wareegeen ayaa aad looga doodayey. Iyada oo loo saarey baaritaanno sidii loogu sameeyn lahaa, hase yeeshee muddo markay ka soo wareegtaba la hadal hayey, illaa laga ogolaaday inay nolol-maalmeedkayaga ka mid noqoto. Iilamana muuqato in dhabbadaa lagu sii socdo.
Sannadkii 2011 ayuu maamulka degmada Sala uu isku dayay inuu ka soo saaro xeer mamnuucaya baryada, hase yeeshee uu baabi’iyay hoggaanka gobolka Västmanland. Carina Wutzler waxay rajenaysaa in degmada Vellinge ay ku guuleey-san doonto, maadaama go’aanka degmada Vellinge loo dhigay hab ka duwan.
–Waxay iigu muuqataa in aannu leenahey suurtagallo ka ballaaran inaannu go’aankan hir-gelinno. Degmada Sala waxay soo jeedisay go’aan degmada oo dhan ka mamnuucaya baryada, hase yeeshee annaga taayadu mamnuucayso goobo degmada ka mid ah oo aannu u aragney iney dhibaato ku hayso, sida ay sheegtay.
–Faras-magaalaha degmada oo ay degmadu masuul ka tahay dhulkaa. Waxaa muhiim ah in aannu caddeeyno ineynaan ka mamnuuci karin goobo hanti gaar ahaaneed loo leeyahay. Bartammaha magaalada Vellinge, qaybo ka mid ah bartamaha Höllviken, bartamaha Skanör iyo dekedda Skanör.
Carina Wutzler ayaa sheegtay iney degmooyin badabni ka war sugeyaan sida uu go’aanka Vellinge ku dambeeyo iyo in mamnuucidda baryadu hir-gasho iyo in kale.
–Degmooyinka qaarkood ayaa nala soo xiriirey iyaga oo dooneya iney wax ka ogaadaan hab-fikirkayagii iyo sida go’aanka loo qori doono, sidaa daraadeed waxaan u maleeyn iney degmooyin kale nagu dayan doonaan, sida ay sheegtay.
Heshiis sidee ah ayaa degmada Vellinge loogu yahay go’aankan aad gaadheen?
–Go’aankan ayaa lagu hggaarey aqlabiyad. Dhanka kale waxaa jira dad ka xun masaakiinta. Aniga laftaydu waan ka xumahay, waa muhiin in la sheego middaa, waa su’aal go’aankeedu adag yaha. Waxaa la sheegaa inay la macne tahay in fakhriga la mamnuuco, hase yeeshee middaa lama xiriirto. Waxaan ula jeedaa baryadu xal uma ahan fakhriga ee waa fal muujinaya inay jirto caqabad u baahan in xal waara laga gaaro, sida ay sheegtay Carina Wutzler, oo hoggaanka degmada Vellinge u matasha xisbiga Moderaterna.
Ma taageer-san tahay in baryada laga mamnuuco dalka?